Mashruuca Muuqaalka Xuquuqda Aadanaha ee Gobolka Sonoma Survey
Mashruuca Muuqaalka Xuquuqda Aadanaha ee Gobolka Sonoma
Fadlan si gooni gooni ah uga warbixi dhacdo kasta oo bixi macluumaad badan intii suurtagal ah. Waad soo sheegi kartaa inta jeer ee loo baahdo. Dhammaan jawaabaha waa qarsoodi waxayna noo oggolaan doonaan annaga iyo la-hawlgalayaashayada wada-shaqeynta ah inaan la soconno dhacdooyinka xuquuqda aadanaha iyo arrimaha ka jira Gobolka Sonoma inta lagu jiro iyo ka dib Covid-19.
Ma la wadaagi doonno macluumaadkaaga aqoonsiga qof iyo qof saddexaad oo ay ku jiraan kuwa maxalliga ah,
hay'adaha sharci fulinta ee gobolka iyo federaalka. Waxaan u adeegsan doonnaa xogta la soo aruuriyay si loo aqoonsado meelaha baahiyaha loo qabo oo aan uga warbixino macluumaadka tirakoobka si aan si fiican ugu hagaajino xuquuqda aadanaha iyo sharafta dhammaan dadka deegaanka ee Gobolka Sonoma.
Nasiib darrose, kama jawaab celin karno soo gudbinta. Haddii arintu degdeg tahay, fadlan WAC 911.
* 1. Yaad u warramaysaa?
Waxaan ka waramayaa dhacdo igu dhacday.
Waxaan ka waramayaa dhacdo aan goobjoog u ahaa.
Waxaan ka warbixinayaa dhacdo qof aan awoodin inuu sameeyo warbixintiisa.
* 2. Fadlan sheeg jinsiyaddaada ama qofka aad u warramayso (sax dhammaan inta khuseysa):
Isbaanish ama Latinx
Aasiyaan ama Aasiyaan Mareykan ah
Yurubiyaan Mareykan ah
Fadlan cadee aqoonsigaaga dhaqan (tusaale ahaan, Ereteriya, Filibiin, Guatemala, Iiraan, Kuuriya, iwm)
* 3. Fadlan sheeg jinsigaaga iyo / ama aqoonsigaaga jinsi (calaamadee dhammaan kuwa ku habboon):
* 4. Fadlan sheeg da'daada
Kayar 18 sano
* 5. Fadlan sheeg haddii mid ka mid ah duruufahaas ay sharraxayaan adiga ama qofka aad u warramayso (calaamadee dhammaan kuwa khuseeya):
Waxaan ahay qaata DACA
Waxaan ahay shaqaale beeraha
Waxaan la kulmayaa hoy la’aan
Waxaan xubin ka ahay bulshada LGBTQ +
Waxaan ahay qof naafo ah
Waxaan ahay dukumiinti
* 6. Taariikhda dhacdada
* 7. Goobta ay ka dhacday
Daryeelka Ilmo Korsiga
Hoy hoylaawe ah
Ilaalinta wadooyinka ee ilaalinta sharciga
Joojinta taraafikada taraafikada
Hoyga daryeelka guryaha
* 8. Fadlan ka dooro mawduuc hoosta tabta hoosta oo sida ugu fiican u sharraxaysa dhacdadaada xuquuqda aadanaha:
Nidaamka Caddaaladda Dambiyada Waxbarasho Shaqada iyo Shaqaalaha Maxkamadda Qoyska Hubin la'aanta cuntada Daryeelka caafimaadka Hoylaawe Guriyeynta Socdaalka Xabsi ku jira Ku Dhaqanka Sharciga LGBTQ + Xuquuqda Caafimaadka Maskaxda Dadka Naafada ah Amniga Qofka Cunsuriyada iyo naceybka